क–कसले बनाएका छन्, ओडिआईमा दोहोरो शतक ? - सबै खेल
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट फिचर
क–कसले बनाएका छन्, ओडिआईमा दोहोरो शतक ?
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०१:०५ May 31, 20190Comments ICC World Cup 2019
१२औं संस्करणको आईसिसी एकदिवसीय विश्वकप इंग्ल्यान्डमा बिहीबारबाट सुरु भएको छ । उद्घाटन खेलमा आयोजक इंग्ल्यान्डले दक्षिण अफ्रिकालाई १०४ रनले पराजित गरेको छ । एकदिवसीय क्रिकेटमा बनेका ६ दोहोरो शतकमध्ये २ दोहोरो शतक विश्वकपमा बनेका छन् ।
जसमा सबैभन्दा धेरै भारतीय ब्याट्सम्यान छन् ।
भारतका तीन ब्याट्सम्यानले एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो शतक प्रहार गरेका छन् । एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो शतक, को विरुद्ध, कहिले, कसले प्रहार गरेका छन् ? यसबारे सबैखेल डटकमका लागि महेश कार्कीले तयार गरेको एक रिपोर्ट :
सचिन तेन्दुलकर, भारत
२०० रन (दक्षिण अफ्रिका), २४ फेब्रुअरी २०१०
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेन्दुलकर एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी हुन् । सचिनले सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध नटआउट २ सय रन बनाउँदै दोहोरो शतक बनाउने पहिलो ब्याट्सम्यान बनेका थिए । भारत भ्रमणमा रहेको दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध ग्वालिओरमा भएको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा सचिनले १ सयन ४६ बलको समाना गर्दै दोहोरो शतक बनाएका थिए । सो क्रममा सचिनले २५ चौका र ३ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्न्यास लिइसकेका सचिनले क्रिकेट करियरमा २ सय टेस्ट र ४ सय ६३ एकदिवसीय क्रिकेट खेलेका छन् । जसमा उनले ५१ शतकको मद्दतमा टेस्ट क्रिकेटमा १५ हजार ९ सय २१ रन बनाएका छन् भने एकदिवसीयमा १८ हजार ४ सय २६ रन बनाएका छन् । जसमा ४९ शतक र ९६ अर्धशतक सामेल छन् ।
विरेन्द्र सेहवाग, भारत
२१९ रन (वेस्ट इन्डिज), ८ डिसेम्बर २०११
एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो शतक प्रहार गर्ने दोस्र्रो खेलाडी हुन्, भारतका वीरेन्द्र सेहवाग । सेहवागले सन् २०११ डिसेम्बर ८ मा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध २ सय १९ रन बनाउँदै सचिनको रेकर्डसँग बराबरी गरेका थिए ।
भारत भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिजविरुद्ध इन्दोरमा भएको चौथो एकदिवसीय खेलमा सेहवागले १ सय ४९ बल खेल्दै २ सय १९ रन बनाएका थिए । उनले २३ चौका र ६ छक्का प्रहार गरेका थिए । सेहवागले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्न्यास लिइसकेका छन् । उनले भारतका लागि १ सय ४ टेस्ट र २ सय ५१ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । सेहवागले टेस्टमा ८ हजार ५ सय ८६ रन बनाएका छन् भने एकदिवसीयमा ८ हजार २ सय ७३ रन बनाएका छन् ।
रोहित शर्मा, भारत
२०९ रन (अष्ट्रेलिया), २ डिसेम्बर २०१३
रोहित शर्मा एकदिवसीय क्रिकेटमा तीन दोहोरो शतक प्रहार गर्ने एकमात्र खेलाडी हुन् भने दोहोरो शतक बनाउने तेस्रो खेलाडी हुन् । उनले अष्ट्रेलियाविरुद्ध एक र श्रींलंकाविरुद्ध २ दोहोरो शतक बनाएका छन् । रोहितले पहिलो दोहोरो शतक अष्ट्रेलियाविरुद्ध २ डिसेम्बर २०१३ मा बनाएका थिए ।
चिन्नस्वामी स्टेडियम, बेंग्लोरमा भएको खेलमा रोहितले १ सय ५७ बलको समना गर्दै २ सय ९ रन बनाएका थिए । सो क्रममा उनले १२ चौका र १६ छक्क प्रहार गरेका थिए । त्यसैगरी रोहितले सन् २०१४ मा इडेन गार्डेनमा भएको श्रीलंकाविरुद्धको खेलमा २ सय ६४ रन बनाएका थिए ।१ सय ७३ बल खेलेका रोहितले ३३ चौका र ९ छक्का प्रहार गरेका थिए । यो एकदिवसीय क्रिकेटमा कुनैपनि खेलाडीले बनाएको उच्च योगफल हो ।
त्यस्तै, रोहितले तेस्रो दोहोरो शतक पनि श्रीलंकाविरुद्ध नै बनाएका थिए । १३ डिसेम्बर २०१७ मा चण्डिगढमा भएको खेलमा उलने २ सय ८ रन बनाएका थिए । भारत भ्रमणमा आएको श्रीलंकाविरुद्ध दोस्रो एकदिवसीयमा रोहितले १ सय ५६ बलको सामना गर्दै १३ चौका र १२ छक्को सहयोगमा तेस्रो दोहोरोशतक बनाएका थिए ।
एकदिवसीयमा तेस्रो दोहोरो शतक बनाउँदा भारतीय टिमको कप्तान रहेका रोहितले दोहोरो शतक बनाउने कप्तानको कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका थिए । रोहितले १ सय ८१ एकदिवसीय खेल खेल्दै ६ हजार ७ सय ३० रन बनाएका छन् भने ८४ टि२० खेलमा २ हजार ८६ रन बनाएका छन् । त्यसैगरी, उनले २५ टेस्टमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै १ हजार ४ सय ७९ रन बनाएका छन् ।
क्रिस गेल, वेस्ट इन्डिज
२१५ रन (जिम्बाबे), २४ फेब्रुअरी २०१५
वेस्ट इन्डिजका विस्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेल एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो शतक प्रहार गर्नें चौथो ब्याट्सम्यान हुन् । २४ फेब्रुअरी २०१५ मा आइसिसी विश्वकपमा जिम्बाबेविरुद्ध २ सय १५ रन बनाउँदै उनी दोहोरो शतक बनाउने भारतभन्दा बाहिरको पहिलो खेलाडी बनेका थिए ।
अष्ट्रेलियाको ओभलमा भएको खेलमा गेलले १० चौका र १६ छक्का प्रहार गरेका थिए । गेल एकदिवसीय विश्वकपमा दोहोरो शतक बनाउने पहिलो खेलाडी हुन् । वेस्ट इन्डिजका लागि २ सय ८१ एकदिवसीय खेलमा सहभागिता जनाएका खेलले ९ हजार ५ सय ८५ रन बनाएका छन् भने ३ सय ३५ टि२० खेल्दै ११ हजार ४ सय ५४ रन बनाएका छन् । त्यस्तै, १ सय १ टेस्टमा वेष्टइन्डिजको प्रतिनिधित्व गरेका गेलले ७ हजार २ सय १४ रन बनाएका छन् ।
मार्टिन गुप्टिल, न्युजिल्यान्ड
२३७ रन (वेस्ट इन्डिज), २२ मार्च २०१५
न्युजिल्यान्डका ओपनिङ ब्याट्सम्यान मार्टिन गुप्टिल एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो शतक बनाउने पाँचौं खेलाडी हुन् । उनले २२ मार्च २०१५ मा एकदिवसीय विश्वकपको वेस्ट इन्डिजविरुद्धको खेलमा २ सय ३७ रनको विशाल इनिङ खेलेका थिए । गुप्टिलको यो इनिङ एकदिवसीय विश्वकपको उत्कृष्ट इनिङ र उच्च व्यक्तिगत योगफल पनि हो । न्युजिल्यान्डको विलिङटनमा भएको खेलमा गुप्टिलले १ सय ६३ बल खेल्दै २४ चौका र ११ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
न्यूजिल्यान्डका लागि १ सय ५४ खेल खेलेको गुप्तिलले ५ हजार ८ सय ६३ रन बनाएका छन् भने ४७ टेस्टमा २ हजार ५ सय ८६ रन बनाएका छन् । उनले ७५ अन्तर्राष्ट्रिय टि२० मा २ हजार २ सय ७१ रन बनाएका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय टि–२० मा कुनै पनि खेलाडीले बनाएको सबैभन्दा धेरै रन हो ।
फखर जमान, पाकिस्तान
२१० रन (जिम्बाबे), २० जुलाई २०१८
पाकिस्तानी अलराउन्डर फखर जमान एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो शतक बनाउने छैठौं ब्याट्सम्यान हुन् । उनले २० जुलाई २०१८ मा जिम्बाबेविरुद्धको चौथो एकदिवसीय खेलमा दोहोरो शतक बनाएका थिए । सो खेलमा जमान २ सय १० रनमा नटआउट रहेका थिए ।
इमाम उल हकसँग ओपनिङका लागि आएका जमानले १ सय ५६ बल खेल्दै २४ चौका र ५ छक्काको मद्दतमा दोहोरो शतक बनाएका थिए ।
१ सय १३ रन बनाएका इमाम उल हकसँग जमानले पहिलो विकेटका लागि ३ सय ५ रनको साझेदारी गरेका थिए । यो पहिलो विकेटका लागि कीर्तिमानी साझेदारी पनि हो । यसअघि यो कीर्तिमान श्रीलंकाका उपुल थरंगा र सनथ जयसूर्याको नाममा थियो । उनीहरुले सन् २००६ मा इंग्ल्यान्डविरुद्ध पहिलो विकेटका लागि २ सय ८६ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
← मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिमको बिदाई
इंग्ल्यान्डसामु दक्षिण अफ्रिकाले घुँडा टेक्यो (इन्फोग्राफिक्स) →
टेस्ट क्रिकेटमा ब्रोडले बनाए रेकर्ड, पुरा गरे ५ सय विकेट
१४ श्रावण २०७७, बुधबार ००:२३ 0
सन्दीपको टिम आज चट्गाउँ भाइकिंग्ससँग भिड्ने
२५ पुष २०७५, बुधबार ०२:५५ 0
टि–१० लिगमा ४५ हजार डलरमा बिके सन्दीप
३० आश्विन २०७६, बिहीबार ०१:१६ 0